I-Blue Jeans, isimangaliso semibhalo 'esingibambe sengimdala' | Izincwadi Zamanje
IBlue Jeans, into ebhaliwe 'engibambe ngimdala'
Isizukulwane ngasinye sabafundi sine-saga yaso noma leyo ncwadi eyayiyi-boom ngesikhathi sayo. Ngama-90s eSpain sathola umseshi uFlanagan, ophambili ochungechungeni lwamanoveli, noma uLucía Etxeberría Beatriz nemizimba yasezulwini Kwakuyingqophamlando esizukulwaneni sesigamu sesibili sama-90s.
Abezindaba bangashintsha, kepha kuhlale kune-saga, umlingiswa noma umbhali okwazi ukuthola ukuchofoza okuxhuma nentsha kanye nabantu abasha besikhathi sakhe. Eminyakeni yamuva, umlobi waseSevillian uFrancisco de Paula Fernández, owaziwa kangcono njengo I-Blue Jeans.
Ngifunde ngendaba yeBlue Jeans kule mpelasonto lapho, ngibuka izindaba kuthelevishini, ngibone amakhulukhulu entsheni eMadrid Book Fair emgqeni ephethe incwadi esandleni ukuze umbhali ayisayine.
Incwadi okukhulunywa ngayo iyinoveli yakamuva yalo mbhali wase-Andalusi, Okuthile okulula njengoku tweeting ngiyakuthanda, enyatheliswa yindlu yokushicilela yasePlaneta.
IBlue Jeans yisona mbumbulu esisetshenziswe nguFrancisco de Paula Fernández, waseSevillian ohlala eMadrid oneziqu zobuntatheli e-European University of Madrid. Indaba yakhe ingenye yalezi zindaba ezenzeka kaningi namuhla: waqala ukubhala kubhulogi waze washicilelwa ngumshicileli.
Ngakho-ke, indlu yokushicilela i-Everest eyashicilelwa ngo-2009 Izingoma zikaPaula, inoveli yokuqala ebinokuqhubeka ne- Uyazi ngiyakuthanda? y Ngithulise ngokwanga.
Ngemuva kokuphumelela kwalesi saga, ngenxa yokuthi wathola abalandeli abangaphezu kuka-500.000, waqhubeka nomsebenzi wakhe onganqandeki ngaleli saga elisha Iqembu labangaqondi kahle, yakhiwa ngu Sawubona nkosazana!, Musa ukumamatheka ukuthi ngithandana y Ngingaphupha nawe?
Amanoveli akhe azungeza abalingiswa abasebasha nabancane abathola uthando kanye nokushintshashintsha kwemizwa, ubungani, ukukhaphela kanye nokuhlangenwe nakho okusha empilweni okuncane okudala ubuntu bomuntu omdala.
Ngenxa yezindaba zayo, isitayela nomkhiqizo okwazile ukuxhumana nomphakathi wanamuhla osemusha, iBlue Jeans isekelwa ngabagxeki ngemiklomelo eyitholile njenge-Off The Record Award ye-Best Youth Saga ngo-2014 noma Umklomelo weCervantes Chico 2013.
Unelungelo lokuba ngumbhali waseSpain onabalandeli abaningi kumanethiwekhi omphakathi, indawo azalelwa kuyo… nalapho eqhubeka nokunqoba khona.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » izinhlobo » Izincwadi Zentsha » IBlue Jeans, into ebhaliwe 'engibambe ngimdala'
Ukulungiswa kwe-'The Flowers of Evil 'kushicilelwa eFrance
Abaphumelele i-Oscar abayi-19 ekuguquguqukeni kwamahlaya eMarvel